Jwxo-shiil: Dad waxaan Ugu Jeclahay, Habraha Buufisku Dilooday ee in ay Hadalka Dhagaystaan Jecel oo ay Taydu Ugu Horeyso – Rasaasa News
Nov 1, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Jwxo-shiil iyo beeshiisa, oo qolkii Hindida ee buufiska Southal barito habro uu buufis baro ka dhigtay beeso kaga qaadanaya, waxaanuna bulshada ku baraarujinaynaa in ayna dhag u dhigin sawirada ay bari ku arki doonaan boggaga beenta Jwxo-shiil, waana uun habro buufis hayo oo loo sheekaynayo.
Hadii uusan ruux xishoon ama uusan ku dhaqmin anshaxa Islaamka waxa walba waa uu sameeyaa, waxaana uu u dhaqmaa had iyo goorba sida ciyaal suuqa amaba ruux waalan oo kale, dhadhankuna wuu ka tagaa.
Jwxo-shiil, oo aduunka oo dhan laga daawaday todobaad ka hor, kol uu soo horfadhiistay TV caalamiga ah ee Universal, lana kulmay wacdaro uu waano ku qaato nin wayni, ayeyna kaba dhaadhacsanayn in uu soo gaadhay wax khayeysiin ah. TV oo ay daawanayeen Milaayiin Somali ah, ayaa waxaa Jwxo-shiil lagu waydiiyey su,aalo waxaana lagu qiray in uu yahay dambiile weyn oo dhagar ka galay halganka Somalida Ogadeeniya. Jwxo-shiil waa sideedtan jirin uuna dhimirkiisu fiicnayn, waligiiban qawl dharban ma sheegin, kha,inimona way u dheertahay, waxaana ku idil Jwxo-shiil calaamadaha lagu sheegay Ehelunaarka.
Jwxo-shiil, ayey kooxdiisu ka kooban tahay dadka leh sifooyinkan; Haweenka waaweynaaday ee aan raga lahayn ee xishoodka daran buufiskuna wareeriyo oo iyagu kaliya ka hela in meel la isugu yimaado oo ay ka yaraha had hadlaan ama ay dhagaystaan dad had hadlaya. Wiilsha yar yar ee ciyaal suuqiinta ah ee iskuulada lagu kari waayey shaqan haba sheegin hadalkeeda, kuwaas oo badankooda ay dhaleen habraha buufisku daashaday oo jecel in ay kaga ilaaliyaan wiilasha daroogada, Gabdhaha da,ada yar ee Jwxo-shiil taageera, ayaa ah kuwo ugu yaraan hal mar la furay oo wata Ilmo aan Aabe lahayn [single mothers], kuwaas oo la,a wax la hadla oo iyaguna naf ka daya wiilasha ciyaal suuqa ah ee ay dhaleen habraha buufiska. Waxaa kale oo Jwxo-shiil taageera Odayaal waaweynaaday oo aan waligood waxba guursan reerna lahayn oo intooda badani ay qaadka ka baryootamaan meelaha ay dadka noocaas ah isugu yimaadaan.
Jwxo-shiil, waxaa uu shir u qabtaa dadka noocaas ah ee uu buufisku kadeeday ee ay takhaatiirtu kula taliyeen in ay dadka la sheekaystaan, dadkani waxay soo huwadaan calamo midaba leh iyo masaro midaba leh. kolka ay hoolka yimaadaan waxaa loo saaraa muusic kolkaas ayey istaagaan oo ay ciyaaraan, kolka ay xoogaa dhididaan ayey hadal bilaabaan iyaga oo isweydiinay ma soo qadaysay xageed caawa fadhiisanaysaa, wiilkii ma laga furay katiinadii lugta kaga xidhnayd, gabadhii ninkii ma u soo noqday iyo hadalo noocaas ah oo lagu yaqaan bulshada inteeda xun.
Waxaa meeshaas ka hadla kuwo buufis la il xun oo ay habruhu ugu yeedhaan in ay halgamaa yihiin, oo kolka aad indhahooda fiiriso aad is odhan ruuxani muxuu la ooyayaa, oohina ma aha ee waxaa buuxiyey indhahooda biyo ay ugu wacan tahay fadhi badan iyo hurdo badan, dal tabyo weyna iyo daalna wuu ka muuqdaa. kuwa isugu yeedha halgamayaal ee Duqayda, kurayda ciyaal suuqa ah, habraha iyo caruurta hoolka ku madadaaliya waa kuwo aan waligood wadankii tagin, waxayana habraha u sheegaan in uu dagaal ka socdo dalka oo todobaadkan dhaxdiisa ay dhaceen ilaa iyo toban dagaal, kolkaas ayey mashxaradaan oo ay cuntadu u furantaa habraha.
Waa sababtaas sababta uu Jwxo-shiil, labadii todobaadba hal mar u tago qol ay habro iyo odayaal idho la,a isugu yimaadaan oo uu isaga laftigiisu ka mid yahay.
Hadaba maalika bari ah Jwxo-shiil iyo kooxdan aan idiin sharaxnay waxay isugu iman doonaan qol ku dhaw guriga Jwxo-shiil, halkaas ayeyna muusik maskaxdooda rogta ku dhagaysan doonaan, waxaana sheekooyin been ah u sheegi doona been hawaas Jwxo-shill iyo kuwo kale oo ilmaynaya.
Sidaas daraadeed hadii aad bari ku aragtaan boggaga beenta ee Jwxo-shiil run ha moodin, waa sawiradii lagu hodi jiray dadka halganka taageersan ee lagu maali jiray habraha buufisku barada ka dhigtay.
Waxaa kale oo haya ciilkii Jwxo-shiil ka raacay waraysigii TV Universal oo uu doonayo been uu ku maydho wixii ka raacay, taas oo aan suurto gal ahayn.